यी हुन् प्रदेश ५ का घुम्नैपर्ने ठाउँ
बुधवार, पुष १६, २०७६ लुम्बिनी टाइम्स
लुम्बिनी :- विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रुपन्देही जिल्लामा पर्दछ । लुम्बिनी बौद्ध धर्मालम्बीहरुको पावन र तपोभूमि हो । झण्डै २५६२ वर्ष अगाडि जन्मिएका गौतम बुद्धलाई ‘द लाइट अफ एसिया’ बाट समेत चिनिन्छ । लुम्बिनीमा विभिन्न देशका कला संस्कृति झल्कने खालका गुम्बाहरु समेत रहेका छन । मायादेवी मन्दिर प्रमुख आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो । लुम्बिनी बौद्ध धर्मालम्बीहरु मात्रै होइन, हिन्दूहरुले समेत आस्थाको केन्द्रको रुपमा सम्मान गर्ने पवित्र भूमि हो ।
रानीमहल : लोभलाग्दा पाखापखेरा तथा छहराहरुको बीचमा रहेको पाल्पाको रानीमहल अर्को पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो । नेपालको ताजमहलको रुपमा चिनिने रानीमहल कालीगण्डकी नदीको उत्तरतर्फको मोडमा विशाल चट्टानमाथि पश्चिमी कला शैलीमा निर्माण भएको छ । जनरल खड्ग शमशेरले आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा रानीमहलको निर्माण गरेका हुन् । वि.सं. १९५० सालमा शिलान्यास भइ चार वर्ष लगाएर यसको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
स्वर्गद्वारी : प्यूठान जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट २६ किलोमिटर पश्चिममा रहेको स्वर्गद्वारी पाँच नम्बर प्रदेशकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो । यसलाई नेपालका प्राचिन मन्दिरहरुमध्ये एउटा मानिन्छ । समुद्री सतहबाट ७ हजार फिट उचाईंमा रहेको यसको क्षेत्रफल २६ सय रोपनी रहेको छ । पौराणिक कालमा पाण्डवहरु स्वर्ग जाँदा त्यही बाटो भएर गएको द्वार भएकाले स्वर्गद्वारी नाम रहेको जनविश्वास रहेको छ । रोल्पाको घुम्तीमा वि. सं १११६ मा जन्मिएका १०८ बाल तपस्वी नारायण गौतम ११५१ मा स्वर्गद्वारी आएपछि वेदका मन्त्रद्वारा अग्निप्रज्वलित गरी ११५२ वैशाख पूर्णिमादेखि अखण्ड महायज्ञ सुरु भएको थियो । विश्व शान्तिका लागि सञ्चालित अखण्ड यज्ञ अहिले पनि निरन्तर बलिरहेको छ ।
बर्दिया ठाकुरद्वारा : जंगली जनावरको अवलोकन र सिमसार क्षेत्रको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्यका लागि बर्दियाको ठाकुरद्वारा प्रमुख स्थल हो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा यो पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । ठाकुरद्वारामा दुर्लभ मानिएको पाटे बाघका साथै अन्य जनावर समेत पाइने गर्दछन् । स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरुका लागि घुमफिर गर्न ठाकुरद्वारा आकर्षक गन्तव्य हो ।
रिहार : दाङ जिल्लाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थल रिहार हो । यसको इतिहास ५ हजार वर्ष पुरानो रहेको छ । द्वापर युगमा ऋषिमुनिहरुले विहार गरेको हुँदा यो ठाउँको नाम रिहार रहनगएको धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
पाणिनि तपोभूमि : अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका जंगलको बीचमा पाणिनी तपोभूमि अवस्थित रहेको छ । पाणिनी तपोभूमिको उत्तरतर्फको पानी कालीगण्डकी र दक्षिणतर्फको पानी बाणगंगा नदीमा मिसिन आउँछ । तपोभूमिमा मन्दिर, यज्ञशाला, भ्यूटावर बगैंचाका साथै पाणिनी ऋषिको मूर्तिसमेत रहेको छ ।
रेसुंगा : गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासदेखि ६ किलोमिटर उकालो दूरी पार गरेपछि रेसुंगा क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ । त्यहाँबाट विभिन्न हिमश्रृंखला, तालतलैयाका अतिरिक्त तराईको समथरभूमिको समेत दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । समुद्र सतहदेखि १७ सय मिटर उचाइमा रहेको रेसुंगा आफैंमा सुन्दर र अनुपम छ ।
जगदीशपुर ताल : १ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको एशियाकै मानवनिर्मित तालमध्येको ठूलो ताल हो । कपिलवस्तुको निग्लिहवामा रहेको तालमा १२८ भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुंगी, ४६ प्रजातिका माछा तथा दुर्लभ जलचरको बसोबास रहेको छ । हरेक जाडो महिना सुरु भएपछि जगदीशपुर तालमा घुम्न आउने चरा गर्मी महिना सुरु भएसँगै फर्कने गर्दछन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तालमा हिउँदमा साईबेरिया, रुस, चीन, मंगोलिया तथा मध्य एशियाबाट समेत चराहरु आउने गर्दछन् ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, पुष १६, २०७६, ११:५२:१३